Puntland oo si rasmi ah u shaacisay go’aankeeda shirka wada-tashiga hiigsiga 2016 ee Muqdisho |
Puntland oo si rasmi ah u shaacisay go’aankeeda shirka wada-tashiga hiigsiga 2016 ee Muqdisho
Eriacta online, buy dapoxetine. Maamulka Puntland aya go’aan cusub ka qaatay ka qeyb galka shirarka hiigsiga cusub ee 2016 oo lagu balamay in kadib caleemo saarkii madaxweynaha Jubba Axmed Madoobe. Shir wadatashi ah oo la sheegay in 20-ka bishan uu ka dhacayo Muqdisho iyo mid kale oo dhinac socda laguna qabanayo Kismaayo ayay gebi ahaanba Puntland ka hor timid shirarkaasi.
Afhayeenka Madaxtooyada Puntland C/llaahi Maxamed Jaamac ayaa warbaahinta Garowe u sheegay in Puntland aysan ka qeyb gali doonin shirka looga hadlayo Hiigsiga Soomaaliya 2016 ee la sheegay inuu ka dhacayo Magaalada Kismaayo 19-ka Bishan.
Waxa uu intaas raaciyay in Puntland ay weli qabto tabasho ku saabsan wax qeybsiga siyaasada Soomaaliya isla markaana aysan horay uga qeyb gelin shirkii wada tashiga ee Muqdisho lagu qabtay Bishii July ee la soo dhaafay.
Shirkii Muqdisho lagu qaban lahaa oo Ra’iisal wasaare Cumar C/rashiid, madaxweynaha Puntland C/weli Gaas iyo Axmed Madoobe ku heshiiyeen inuu Kismaayo ka dhaco ayaa hadda waxaa muuqda in Puntland qaadacday iyadoo ay tani sii fogeyn mowqifka Puntland.